मैले मेरो परिवारको बलिदानलाई यसरी बुझेँ - शहीदपुत्री सुनिता यादव
बुवाको हातबाट खसेको क्रान्तिको झण्डालाई हाम्री आमाले कहिले झुक्न दिनु भएन । उहाँको जीवन संघर्षको आँधीबेहरीमै गुज्रियो ।
बलिदान कुनै पनि क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने आन्दोलनको मुख्य पाटाे हुने गर्दछ । बलिदानको जग बिना क्रान्तिको आधार निश्चित हुन सक्दैन । नेपालमा १० वर्षसम्म निरन्तर चलेको महान जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरुले पनि आ-आफ्नै बलिदानको इतिहास बोकेकै छन् ।
जीवन र मृत्युको परिभाषा मानिसको सोचाइमा निर्भर हुने गर्दछ । फेरि पनि परिवारिक सदस्यहरुको मृत्युको पीडा सहन गर्न भनेजस्तो सजिलो नहुँदो रहेछ ।त्यो त प्रत्यक्ष भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । मर्नेहरु एक पटक मर्दोरहेछ तर बाँच्नेहरु सयौँ पटक उनको वियोगमा मर्ने गर्दछ । यो एउटा कटु यथार्थ हो ।
फेरि पनि बलिदान किन र केका लागि भन्ने प्रश्नले निकै महत्त्व राख्दछ । मेरो परिवारका सदस्यहरुको शहादत जनताको मुक्तिको निम्ति भएको थियो ।निरंकुश सामन्ती राजतन्त्रको दासताबाट मुक्ति पाउनको निम्ति भएको थियो ।जसमा करिब १७,००० महान नेपाली आमाका सन्तानहरुले पनि आफ्नो अमूल्य रगत बगाएका थिए । यत्रो ठुलो बलिदान, हजारौँ घाइते र अपाङ्गहरुको योगदानले मात्र आजको यो परिवर्तन सम्भव भएको हो । सायद यसमा कसैको दुविधा हुनै सक्दैन ।
आज त्यो बलिदानको मूल्यलाई ठिक ढंगले बुझ्न अझ जरुरी छ । सत्ताको लडाइँ भन्दा पनि विचारको बहसमा नेताहरु केन्द्रित हुनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ । अनि मात्र शहीदहरुको सपनालाई साकार पार्न सकिन्छ ।
भदौ २ गते । मेरो बुवा महान शहीद रामवृक्ष यादवको २६औँ स्मृति दिवसको सन्दर्भ । यस वर्षको बिचमा हाम्रो परिवारबाटै अन्य सदस्यहरुको पनि शहादत भइसकेको छ । २०५८ पुष १५ गते संकटकाल कै समयमा मेरो एक मात्र दाजु शेखर यादव, जसको विवाहको एक बर्ष पनि नपुग्दै उहाँको २२ वर्षको उमेरमै निर्मम हत्या गरियो । केहि समयपछि २०६१ पुष २८ गते मेरो प्रिय जिवनसाथी डम्बरनारायण यादवको पनि युद्धकालमै हत्या गरियो । यतिसम्म कि हाम्रो परिवारको सम्बन्धीहरुलाई पनि छोडेन र मेरो ३ जना काकाहरु (बुवाको सानीआमा र मामाका छोराहरु) लाई पनि हत्या गरियो ।
यी सब पीडाहरु सहन गर्न हाम्रा लागि सजिलो थिएन तर क्रान्तिप्रतिको आस्था पनि हामीमा कम थिएन । यी सबै बलिदानपछि पनि हामीले शोषित पीडित जनताको उज्ज्वल भविष्यको सपना देखिरहेका थियौँ । र, निरन्तर अगाडि बढिरहेकै थियौँ ।
बुवाको हातबाट खसेको क्रान्तिको झण्डालाई हाम्री आमाले कहिले झुक्न दिनु भएन । उहाँको जीवन संघर्षको आँधीबेहरीमै गुज्रियो । पछि आमालाई पार्टीले अन्तरिम विधायिका बनायो । र, २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा धनुषा-६ बाट भारी मतले उहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित पनि हुनुभयो । यत्रो ठुलो बलिदानबाट आगडि बढेको उहाँको यात्रा त्याग, समर्पण, बलिदान र संघर्षको अनुपम नमुना हो, जुन हाम्रा लागि सँधै प्रेरणादायी छ ।
मैले बुवाको प्रत्यक्ष माया पाउन सकिन । आमा नै मेरा लागि सबै हुनुहुन्थ्यो । तर उहाँको पनि २०६७ साल श्रावण २९ गते ग्याँस दुर्घटनामा परी दु:खद निधन हुन पुग्यो ।
अहिले हामी सबै दिदीबहिनीहरु पनि पार्टीमै छौँ । अहिले संघर्षको रुप फेरिएको छ । उहाँहरु लगायतकै शहीदहरुको बलिदानले देशमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त भई गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएको छ । तर यत्रो ठुलो बलिदानबाट प्रप्त उपलब्धिहरुलाई संरक्षण र संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी आज हामी सबैको काँधमा आइपुगेको छ ।
जनयुद्धका शहीदहरु जसको कारण यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो, उहाँहरुलाई अझै ‘लडाकु’ भनिएको छ । यो हाम्रा लागि पक्कै पनि लाजमर्दो विषय हो । शहीद परिवारहरुले यो परिवर्तनबाट सम्मान र अभिभावकत्व आशा गरेका छन् । हाम्रो नेतृत्व र राज्यले त्यो अविभावकत्व प्रदान गर्न सक्छ कि सकिँदैन, त्यो एउटा ठुलो प्रश्न हो ।
मेरो बुवाको हत्या महान जनयुद्ध तयारीको क्रममा भएको थियो । उहाँलाई एउटा क्रान्तिको प्रेरणाको स्रोत, निरन्तर क्रान्तिका मार्गदर्शक, क्रान्तिको पहिलो हकदार र हाम्रो बुवा-आमालाई क्रान्तिको नमूनायोग्य जोडीको रूपमा पनि चिनिन्छ । यस्तो आमा-बुवाको सन्तान हुनु मेरो लागि गौरवको अनुभूति हो ।
साथै, यसले ठुलो जिम्मेवारीको पनि अनुभूति गराउँदछ । उहाँहरुको कोखबाट जन्मिने सौभाग्य मैले पाएको छु, जसले गर्दा धेरैले मलाई आफ्नो ठान्दछन् र हामीमा विश्वास गर्दछन् । शोषित-पीडित जनताले हामीलाई आफ्नो सन्तान सरह माया गर्दछन् र यो नै मेरा लागि ठुलो सम्पत्ति हो । यो तपाईंहरुको सम्पत्ति र आशालाई मैले कहिल्यै पनि गुम्न दिनेछैन भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
अन्तमा मेरो प्रिय अभिभावकहरुप्रति उच्च सम्मानसहित हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली !
(लेखक महान शहीद क. रामवृक्ष यादव र संविधान सभा सदस्य क. रामकुमारी यादवकी सुपुत्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की युवा नेतृ हुनुहुन्छ ।)
पछिल्लाे - हामी संघीयतालाई जनस्तरमा पुराउने अभियानमा छौँ – उपाध्यक्ष बुद्ध बस्नेत, ऐरावती गाउँपालिका
अघिल्लाे - प्रम ओलीलाई महान बन्ने मौका र त्यसको सदुपयोग